တခါသုံး ခွက်ဖြူဖြူတွေကို သတိထားပေးထားကြောင်းကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » တခါသုံး ခွက်ဖြူဖြူတွေကို သတိထားပေးထားကြောင်းကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်….
တခါသုံး ခွက်ဖြူဖြူတွေကို သတိထားပေးထားကြောင်းကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်….
ရောဂါရဲ့ ဇာစ်မြစ်ကို အဖြေရှာကြည့်ရာ၊ Mr. Varun ဟာ လ္ဘက်ရည်ကြိုက်သူ တစ် ဦးဖြစ် တာမို့ ၊ နေ့ ဘက် ရုံးခန်းမှာ လ္ဘက်ရည် သောက်လေ့ရှိပြီး၊ သောက်တဲ့အခါတိုင်း တစ်ခါသုံးစက္ကူခွက်နဲ့ သာ သောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ စက္ကူတွေရဲ့သဘောသဘာဝ အရ၊ ရေစက်ကလေးထိရင်တောင် စက္ကူသားပျော့ပြီး ယိုစိမ့်ပေါက်သွားတတ်တာမို့ ၊ အရည်တွေထဲ့သောက်လို့ ရအောင် စက္ကူခွက် ပေါ်မှာ ဖယောင်းလောင်းပေးရပါတယ်။
အကယ်၍ ခုလို ဖယောင်းလောင်းထားတဲ့ စက္ကူခွက်ထဲကို လ္ဘက်ရည် (သို့ မ ဟုတ်) ကော်ဖီ ပူပူတွေထဲ့သောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ၊ ခွက်ပေါ်မှာ လောင်းထားတဲ့ ဖယောင်းတစိပ်တဒေသတွေဟာ အရည်ပူပူတွေနဲ့ အတူ ဗိုက်ထဲရောက်သွား ပါတော့တယ်။ ထိုခွက်တွေနဲ့အရည်ပူပူတွေကို ရံဖန်ရံခါမှ သောက်ခဲ့ ရင် ပြဿ နာ မရှိသော်လဲ၊ နေ့ စဉ်သောက်သုံးခဲ့ရင်တော့ အစာအိမ် ကို ဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်။
(၁) တခါသုံး ခွက်ဖြူဖြူတွေကို (လုံးဝ) မသုံးပါနဲ့ ။ (စက္ကူပေါ်မှာ ဖယောင်းလောင်း ထားတာကြောင့် Mr. Varun လို ဝေဒနာမျိုးရ ရှိ စေနိုင်ပါတယ်)
(၂) ဖန်ခွက်ကိုလဲ မသုံးသင့်ပါဘူး. (ဖန်ခွက်ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ထိုဖန်ကိုချက်ထားတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက ရေနွေးပူပူတွေ နဲ့တွေတဲ့အခါ ဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြီး၊ အစာ အိမ်နဲ့ သွေးကြောတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်)
တခါသုံး စက္ကူခွက်ဖြူဖြူတွေက သယ်ရတာ ပေါ့ပါးလွယ်ကူ တဲ့အပြင်၊ ဈေးနှုန်းသက်သာ တာကြောင့် သောက်သုံးပြီးတဲ့အခါ အထူးတလည်ပြန်လည်ဆေးကြောနေစရာမလိုဘဲ စွန့်ပစ်နိုင်လို့အိမ်ရှင်မများအကြိုက်တွေ့ ရုံမက၊ ကုမ္ပဏီ/ရုံးခန်း/စား သောက် ဆိုင်တော်တော်များများမှာ အသုံးတည့်လို့ နေပါတယ်။ သို့ သော် Mr. Varun လို အ လားတူရော ဂါပြဿ နာမျိုး မဖြစ်ရ လေအောင် အချိန်မှီ သတိပြုဆင်ခြင် နိုင်ကြ ပါစေကြောင်း ကျမ္မာသုတအဖြစ် မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
အမရေိကနနြိုငငြံရှိ Technopark ကုမျပဏီမှ၊ IT နညြးပညာရှငတြစြဦးဖှစသြူ Mr. Varun ရဲ့ ရောဂါက ထူးဆနြးနပေါတယြ။
သူဟာတနေ့ လုံးနကေောငြးပှီး၊ ညရောကပြှီဆိုတာနဲ့ဗိုကထြဲကရစရြစနြာ တဲ့ဝဒေ နာကို ခံစားရလရှေိ့ပါတယြ။ ဒီလို ဝဒနောစှဲနေ တာ နှစနြဲ့ ခွီနပေါပှီတဲ့။ ဆရာ ဝနတြှနေဲ့ စမြးသပပြှီး သာမနဆြေးစစခြကွလြေးတှေ လုပခြဲ့ပမယြေ့ ရောဂါ ရှာမရ ခဲ့ပါဘူး။ နောကြ ဆုံးမှာတော့ deeper probes(ခြေါ)ရောဂါရှာဖှတေဲ့ ထိပတြုံးခှဲ စိတကြိရိယာတစမြွိုး နဲ့ သူ့ ရဲ့ အစာအိမထြဲကို စစဆြေးကှညြ့ လိုကတြဲ့ အခါ ပှဿ နာ ကို ဖောထြုတနြိုငခြဲ့ပါတယြ။
“အံ့သှစရာဘဲဗွာ..သူ့ ရဲ့အစာအိမထြဲမှာ ဖယောငြးဖှူအနှစတြှေ အနညြ ထိုငနြေ တာအမွားကှီးဗွ… ဒါ ဖယောငြးတိုငလြုပတြဲ့ ဖယောငြးဖှူ အမွိုးအစားတှပေေါ့ ” လို့Mr. Varun ရဲ့ ခှဲစိပြ ဆရာဝနကြ ပှောပါတယြ။
ရောဂါရဲ့ ဇာစမြှစကြို အဖှရှောကှညြ့ရာ၊ Mr. Varun ဟာ လျဘကရြညကြှိုကသြူ တစြ ဦးဖှစြ တာမို့ ၊ နေ့ ဘကြ ရုံးခနြးမှာ လျဘကရြညြ သောကလြရှေိ့ပှီး၊ သောကတြဲ့အခါတိုငြး တစခြါသုံးစကျကူခှကနြဲ့ သာ သောကဖြှစပြါတယတြဲ့။ စကျကူတှရေဲ့သဘောသဘာဝ အရ၊ ရစကေကြလေးထိရငတြောငြ စကျကူသားပွော့ပှီး ယိုစိမြ့ပေါကသြှားတတတြာမို့ ၊ အရညတြှထေဲ့သောကလြို့ ရအောငြ စကျကူခှကြ ပေါမြှာ ဖယောငြးလောငြးပေးရပါတယြ။
အကယြ၍ ခုလို ဖယောငြးလောငြးထားတဲ့ စကျကူခှကထြဲကို လျဘကရြညြ (သို့ မ ဟုတြ) ကောဖြီ ပူပူတှထေဲ့သောကလြိုကတြဲ့အခါမှာ၊ ခှကပြေါမြှာ လောငြးထားတဲ့ ဖယောငြးတစိပတြဒသတှေဟော အရညပြူပူတှနေဲ့ အတူ ဗိုကထြဲရောကသြှား ပါတော့တယြ။ ထိုခှကတြှနေဲ့အရညပြူပူတှကေို ရံဖနရြံခါမှ သောကခြဲ့ ရငြ ပှဿ နာ မရှိသောလြဲ၊ နေ့ စဉသြောကသြုံးခဲ့ရငတြော့ အစာအိမြ ကို ဒုကျခပေးပါလိမြ့မယြ။
လျဘကရြညြ၊ ကောဖြီ၊ ရနှေေး ပူပူတှသေောကတြဲ့အခါ-
(၁) တခါသုံး ခှကဖြှူဖှူတှကေို (လုံးဝ) မသုံးပါနဲ့ ။ (စကျကူပေါမြှာ ဖယောငြးလောငြး ထားတာကှောငြ့ Mr. Varun လို ဝဒနောမွိုးရ ရှိ စနေိုငပြါတယြ)
(၂) ဖနခြှကကြိုလဲ မသုံးသငြ့ပါဘူး. (ဖနခြှကဖြှစစြဖေို့ အတှကြ ထိုဖနကြိုခကွထြားတဲ့ ဓာတုပဈစညြးတှကေ ရနှေေးပူပူတှေ နဲ့တှတေဲ့အခါ ဓာတဖြောကပြှနပြှီး၊ အစာ အိမနြဲ့ သှေးကှောတှကေို ထိခိုကစြနေိုငပြါတယြ)
(၃) ကှထညေပြဈစညြးနဲ့ လုပထြားတဲ့ ကှခှကေတြှကသော အကောငြးဆုံးဖှစပြါတယြ။ စတီးလခြှကတြှလေဲ သုံးနိုငပြါတယြ။
တခါသုံး စကျကူခှကဖြှူဖှူတှကေ သယရြတာ ပေါ့ပါးလှယကြူ တဲ့အပှငြ၊ စွေးနှုနြးသကသြာ တာကှောငြ့ သောကသြုံးပှီးတဲ့အခါ အထူးတလညပြှနလြညဆြေးကှောနစရောမလိုဘဲ စှန့ ပြစနြိုငလြို့အိမရြှငမြမွားအကှိုကတြှေ့ ရုံမက၊ ကုမျပဏီ/ရုံးခနြး/စား သောကြ ဆိုငတြောတြောမြွားမွားမှာ အသုံးတညြ့လို့ နပေါတယြ။ သို့ သြော Mr. Varun လို အ လားတူရော ဂါပှဿ နာမွိုး မဖှစရြ လအေောငြ အခွိနမြှီ သတိပှုဆငခြှငြ နိုငကြှ ပါစကှေောငြး ကမျွမာသုတအဖှစြ မွှဝလေိုကရြပါတယြ။